Search the Web CITY BY-LAWS XEERARKA DEGAANKA
XEERKA DOORASHADA DEEGAANKA BISMILAAHI RAXMAANI RAXIIM
XEERKA DOORASHADA MADAXTOOYADA IYO G/DEGAANADA (Xeer Lr. 20/2001)
GOLAHA WAKIILADA JAMHUURAIYADA SOMALILAND
Markuu tixgeliyey: Baahida loo qabo ka digo-rogashada hab-beeleedka iyo xaqiijinta himilada ummaddu ka dhursugaysay mudada dheer ee u tartanka xorta ah ee xilalka Qaranka. WUXUU ANSIXIYEY XEERKAN:
Ololaha Doorashada: waxa loola jeedaa hawlgalka ay ururada/axsaabtu iyo murashaxiintoodu ugu tartamayaan iska dhaadhicinta iyo soo kala jiidashada cod-bixiyayaasha. Xafiiska dhexe: waxa loola jeedaa xarunta ugu saraysa ee laga maamulayo hawsha doorashada ee ay ku shaqeeyaan Komishanka.
3. Hawlwadeenka loo diro hawl meel ka baxsan halka uu ku noolaa wuxuu yeelanayaa gunno-saad (subsistence allowance) mudada uu maqan yahay, waxana qorshaynaya Komishanka. Qodobka 21aad
sheego, haddii ay suuragal tahayna idaacadda laga sheego ama wargeysyada lagu baahiyo. OLOLAHA DOORASHOOYINKA
2. Magaalo ama tuulo laguma wada qaban karo maalin qudha wax ka badan laba shir iyo banaan-bax. Qodobka 30aad
1. Markay cod-bixiyayaashu codkooda bixiyaan Gudoomiyaha goobtu wuxuu cod sare ku dhawaaqayaa inay cod-bixintu xidhan tahay. 2. Markuu Gudoomiyaha goobtu ka ururiyo miiska dhamaan waraaqaha iyo qalabka aan tirinta wax ahmiyad ah u lahayn wuxuu bilaabayaa hawsha soo socota:- a. Hubinayaa tirada cod-bixiyayaasha isagoo ka eegaya tirada waraaqaha cod-bixinta.
1. Markuu Gudoomiyaha goobtu dhameeyo hawsha tirinta ee ku xusan qodobada kore wuxuu iyadoo fagaare ah ku dhawaaqayaa wadarta tirada cod-bixiyayaasha, codadka saxda noqday iyo tirada codadka uu helay liis kasta oo xisbi/urur. 2. Intaa dabadeed, Baqshadaha waa la lingaxayaa, korkana waxa lagaga dhufanayaa shaambaddii goobta, waxaana korka wadajir uga saxeexaya Gudoomiyaha goobta, ugu yaraan hal hubiye iyo wakiilada xisbi/urur kasta oo murashaxiin ku leh goobta-codbixinta.
2. Laba nuqul oo qoraalka raadraaca ka mid ah waa in lagu rido saxaradda oo la raaciyo baqshadaha lingaxan ee ku xusan qodobka 55aad oo loo gudbiyo xafiiska doorashada degmada, nuqulka saddexaad waa in loo gudbiyo Gudoomiyaha xafiiska doorashada ee gobolka, iyadoo la raacinayo wixii ka hadhay agabkii doorashada ee kala duwan. Qodobka 55aad
3. Xafiiska doorashda ee gobolku markuu helo natiijada cod-bixinta doorashada Madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa, Wuxuu natiijada u gudbinayaa Komishanka si uu u hubiyo uguna dhawaaqo natiijada si ku meel gaadh ah. Qodobka 59aad
Dacwadaha doorashada 1 Dacwadaha ku saabsan doorashooyinka Madaxweynaha iyo ku xigeenka Madaxweynaha waxa awood u leh maxkamadda sare, waana in dacwadaasi soo gaadho kaalinta maxkamadda 20 maalmood gudahood oo ka bilaabmaya marka lagu dhawaaqo natiijada doorashada. Haddii ay
XOGHAYAHA GUUD G/WAKIILADA C/Qaadir X. Ismaaciil Jirdeh
CODKAAGA DHIIBO KA DIB MARKAAD AKHRIDID XEERKA